Alahady 04 oktobra 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady hitondrana am-bavaka ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mianakavy.
Alahady natokan’ny Fiangonana hitondrana am-bavaka ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mianakavy, Alahady faha 17 manaraka ny Trinité, alahady himbanjinana indray ny lohahevitra vaovao manao hoe « Mirosoa amin’ny finoana Masina »
Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto izao, ary ny litorjia endriny faha telo no narahina.
RANAIVOSON Jacky, biraom-piangonana, no nitarika ny fotoana ; RALANDISON Triumph, Mpitandrina, Tonian’ny sampan’asa sy asa fitoriana filzantsara eo anivon’ny foibe no nitondra ny hafatra.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny Salamo 33 : 1-8.
Ny hira FFPM 200 : 1-2 “RAINAY Ô MASINA!” no nohiraina nanarak’izany ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fiderana. Nisaotra an’Andriamanitra tafavory eto ary nangataka ny Fanahy Masina ka izay rehetra atao eto dia ho voninahitr’Andriamanitra avokoa.
RAKOTOARISOA Tanteraka, mpampianatra ao amin’ny K1, no nitondra ny hafatra.
Koa ny Tenin’Andriamanitra noraisina tamin’izany dia ny Isaia 41:10a : “Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao”
Matetika ny ankizy rehefa hiatraika fanadinana dia matahotra ka tratran’ny fakam-panahy hangalatahaka amin’ny namany satria tsy matoky an’Andriamanitra. Tsy mitondra vokatsoa anefa izany satria mety ho voasazy mafy raha sanatria ka tratr kanefa ny tenin’Andriamanitra efa milaza hoe : « Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao”
Misy koa ny olona sasany tsy matoky ny fitiavan’Andriamanitra eo amin’ny fiainana hany ka rehefa te ho tafita izy dia lasa miditra amin’ireny fikambanana miafina ireny, kanefa Andriamanitra dia efa milaza amintsika manao hoe : « Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao”
Tokony hatoky Azy mandrakariva isika, indrindra rehefa misedra zavatra mafy eo amin’ny fiainana ary tokony hivavaka satria Izy dia hivadika amin’ny Teniny.
Nitsangana ny Sampana Sekoly Alahady rehetra nanao ny Hira FFPM 512 :2 “ HE! MATOKY AHO TOMPO ” nofaranana tamin nofaranana tamin’ny vavaka fisaorana an’i Jesoa noho ny famindrampony.
Natao avy hatrany ny hira FFPM 242 : 1-3 “MISAOTRA ANAO ‘ZAHAY RY RAY” mialoha ny vakiteny .
RAKOTOMANANA Andrimbazotiana, biram-piangonana no nanao ny vavaka ary RAZAFINDRABE John Bam, biram-piangonana no namaky ny Soratra Masina. Novakiana misesy ny perikopa voalahatra ao amin’ny Eksodosy 14:15-22 / Jaona 9:35-41 / Joda 1:17-23
Natao ny hira FFPM 482 : 1-2 “JEHOVAH Ô! IANAO” mialohan’ny toriteny.
Rehefa vita izany dia nohiraina ny hira: FFPM 503 “RY JESOA TOMPO TSARA Ô”
Natolotra ny teny famelan-keloka ary natao ny Hira: FFPM 461 : 1 “ AOKA HO AN’ANDRIAMANITRA ” mialohan’ny nanononana ny Fanekem-pinoana kristiana laharana faha 1.
Nanatanteraka hira iray ny antokom-pihira Hasin’ny Famonjena
Nikirakira ny oronan-tsary : RABEMANANORO Jonathan, RAHARIJAONA Solofonirina ary RANAIVOSON Joël